Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLaurent Et Carole
I-Cosi Apartment ihlaziywe ngokupheleleyo ngamatye aveziweyo kunye nezixhobo ezibalaseleyo. Isiqwenga ngasinye siyingqayizivele ekuhombiseni kwayo. Igumbi lokuhlala ligumbi lokuhlala eliqaqambileyo eliqaqambileyo ngenxa yophahla lweglasi.
Nje ukuba ifakwe kwindlu yeKiamour, uya kuziva ngoko nangoko amandla oxolo akhutshwa yile ndawo. Ngokukodwa kwigumbi lokuhlala phantsi kophahla lweglasi enencwadi elungileyo okanye ukubukela nje iiflakes ziwa ngelixa uziva ubushushu obuthambileyo besitovu. Ilungele oku tshajwa kwakhona
Iyafumaneka: ibhedi, isilawuli, isilawuli, isiseko esihamba nemoto epholileyo, indawo yokudlala….
Le ndlu ikwi-200 m ukusuka kwivenkile yegrosari kwaye ingaphantsi kwe-300 m ukusuka kwindawo yokutyela.
Umbuki zindwendwe ngu- Laurent Et Carole
Kunokuba igcinwe kwaye iyingqondi ngokwendalo, ukuba kuyimfuneko ndonwabile ukuphendula imibuzo okanye izicelo zakho ubuso ngobuso, nge-sms okanye ngefowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Confort